Shwedagon – ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ် ရခိုင်ပြည်အရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော် | MoeMaKa Burmese News & Media
ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ် ရခိုင်ပြည်အရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်
YPI News ဓာတ်ပုံသတင်း၊ ဇွန် ၁၀၊ ၂၀၁၂
ယမန်နေ့ ဇွန် ၉ ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ရွှေတိဂုံဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ်တွင် ရဟန်းသံဃာများနှင့် ပြည်သူလူထုတို့ စုဝေးကြပြီး ရခုိုင်ပြည်နယ်စပ်ဒေသတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် အကြမ်းဖက် ဆူပူလှုံဆော်မှုများကို လက်ရှိနိုင်ငံတော်အစိုးရက အမြန်ဆုံး အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် တောင်းဆိုသည့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှု၊ ချီတက်မှုနှင့် ၀တ်ပြုဆုတောင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
2 Responses to Shwedagon – ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံဘုရားရင်ပြင်တော်ပေါ် ရခိုင်ပြည်အရေး ဆန္ဒထုတ်ဖော်
NINE NINE on June 10, 2012 at 10:40 am
The gov is very slow. Faster Men!
moe on June 10, 2012 at 4:10 pm
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတုန်းက စစ်တပ်က ပါဝါအပြည့်သုံးပြီး ဖြိုခွင်းနိုင်ခဲ့တယ်.. အခုရခိုင်မှာ အကြမ်းဖက်နေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဘာလို့မဖြိုခွဲနိုင်ရတာလဲ မြန်မာစစ်တပ်ဟာ အမြဲတမ်း တလွဲဆံပင်ကောင်း လုပ်နေတယ်… ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကို မကာကွယ်ပေးနိုင်ဘူး.. မြန်မာပြည်မှာ စစ်တပ်အင်အား ၄သိန်းကျော်ရှိတယ်ဆို…